३३ किलो सुनकाण्डले आईजीपी सर्वेन्द्र खनालनै परे अप्ठेरो स्थितिमा – PathivaraOnline
Home > समाचार > ३३ किलो सुनकाण्डले आईजीपी सर्वेन्द्र खनालनै परे अप्ठेरो स्थितिमा
काठमाडौं, १४ वैशाख । सुरक्षा संगठन ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चलेको हुन्छ । हरेक घटना र सूचना सोहीअनुसार प्रवाह हुने गर्छ । तर, प्रहरीका उच्च अधिकृतले नै ‘चेन अफ कमान्ड’ तोडेर ३३ किलो सुनकाण्डमा सूचना प्रवाह गरेको रहस्य खुलेपछि नेपाल प्रहरीका आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल समस्यामा परेका छन् ।
निर्दयी श्रीमान जसले आफ्नै श्रीमतीको टाउको छिनेर प्रहरी कार्यालय गएपछि !! हेर्नुहोस यस्तो भयो !! (भिडियो)